यिनै हुन् बेकसुर भएर पनि ३० महिना जेल जिबन बिताएका सेनाका दुई जवान | समाचार
यिनै हुन् बेकसुर भएर पनि ३० महिना जेल जिबन बिताएका सेनाका दुई जवान
September 3, 2021 NepstokLeaveaComment on यिनै हुन् बेकसुर भएर पनि ३० महिना जेल जिबन बिताएका सेनाका दुई जवान
हतियार चोरी प्रकरणमा दो’षी ठ’हरिएर जेल बसेको नेपाली सेनाका दुई जना जवान ३० महिनापछि निर्दोष ठहर गरिएको छ । सैनिक विशेष अदालतबाट उनीहरू शुक्रबारको फैसलामा निर्दोष ठहर गरिएका हुन्। ‘एसएमजी’ चो’रे’को आ’रोपमा ३० महिनादेखि जेलमा रहेका कालीबहादुर गणका अमल्दार लवकुमार गुरुङ्ग र जवान सरोज तामाङ्गले सफाइ पाएका छन ।
सेनाले ह’ति’यार चो’री’ को मुख्य योजनाकार भनेर अमल्दार पोष्टमा कार्यरत लवकुमार गुरूङ र सरोज तामाङलाई कोट मार्सल गरेको थियो। सेनाकै गंगाधर ढकालले सहकर्मी भरत गुरूङको साउन ७ गते चितवनमा ह’त्या ग’रे’पछि चोरी भएको ह’ति’या’रबारे रहस्य बाहिरिएको थियो।
लव र सरोजले चो’री ग’रेको भनिएको र भरतको ह’त्यामा प्रयोग भएको ह’ति’यार (१००७९२ र वट नं ख २५) एउटै भएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको थियो। ह’त्या’को आरोप लागेका गंगाधरवि’रू’द्ध बिहीबारको फैसलाले २५ वर्ष कैद तोकेको छ।
लव र सरोज भरतपुर कारागारमा रहेका थिए। सेनाको कालिबहादुर गणको आग्रहपछि दुवै जनालाई कारागारले सेनालाई बुझाएको थियो। निर्दोष ठहरिएसँगै उनीहरूको जागिर पुनर्बहाली हुने भएको छ। तर ड्युटीको समयमा अन्य साथीलाई ड्युटी छाडेर आफूहरू दोहोरी साँझ गएको आरोपमा बढुवा भने ३ वर्षका लागि रोकिएको छ।
दुई सैनिकलाई ह’तियार चो’री र ड्यु’टीमा ला’प’रवाही गरेको अभियोग लगाइएको थियो । चोरीमा सफाई पाएका दुई सैनिकलाई २०७५ मंसिर ४ बाट लागु हुनेगरी ३ वर्षसम्म प्रमोशन रोक्ने गर्ने फैसला गरिएको छ । विशेष सैनिक अदालतले उनीहरुलाई कालीबहादुर गणमा हाजिर गराउन आदेश गरेको छ ।
महेन्द्र दल गणमा कार्यरत ‘साथी’ हुद्दा भरत गुरुङको ह’त्या मा संलग्न अभियोगमा ढकाललाई प्रहरीले साउन ७ मा चितवनको टाँडीबाट पक्राउ गरेको थियो । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१७ स्थित सिमलडाँडा खेत नहरमा गुरुङ मृ’त फे’ला परेका थिए । प्रहरीको अनुसन्धानबाट कालीबहादुर गणबाट चो’रेको स’ट मे’शि’न ग’न ‘एसएमजी’ प्रयोग गरेर उनले गुरुङको ह’त्या ग’रे”को खुलेको थियो ।
आज फेरी देखियो यति धेरै जनामा संक्रमण, २३ जनाको मृत्यु , काठमाडौँमा कति ?
जानुहोस् के हो भाकल,के भाकल गरेपछि बुझाउनै पर्छ, नबुझाउँदा के हुन्छ ?
मध्यराती काठमाडौंमा आसपास भूकम्प
September 13, 2021 Nepstok
कलिला मुना हरु बाख्रा चराउन गएका थिए : पहिरो ले सधैंका लागि लागेर गयो